अन्नपूर्ण शनिवार, पुस २९, २०७४ 1792 पटक पढिएको
काठमाडौं : व्यावसायिक सम्झौता गरेको दुई वर्षमा नेपालमा चिनियाँ इन्टरनेट भित्रिएको छ। सन २०१६ को डिसेम्बरमा भएको व्यावसायिक सम्झौताअनुसार नेपालमा हङकङबाट इन्टरनेट भित्रिएको थियो। नेपालले व्यावसायिक सम्झौता गरेको दुई वर्षमा औपचारिक रूपमा चिनियाँ इन्टरनेट नेपाल भित्याउन सफल भएको टेलिकमको भनाइ छ।
भारतबाट ल्याइरहेको इन्टरनेटको एकाधिकार तोड्ने गरी व्यावसायिक तबरबाट अप्टिकल फाइबरको लिंक जोड्न नेपाल शुक्रबार मात्रै सफल भएको नेपाल टेलिमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले जानकारी दिइन्। नेपाल र चीन सरकारबीच इन्टरनेट सञ्जाल विस्तार गर्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सम्झौता भएको १५ वर्ष बितिसकेको छ। नेपालमा चीनबाट भित्रिएको क्रसबोर्डर अप्टिकल फाइबर लिंकको शुक्रबार सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले उद्घाटन गरे।
तत्कालीन सरकारले सन २००३ को डिसेम्बरमै अप्टिकल फाइबर भित्याउने सम्झौता गरेको थियो। १५ वर्ष अगाडि नै खासा झाम्सुङदेखि अरनिको राजमार्ग हुँदै काठमाडौंसम्म इन्टरनेट ल्याउने उल्लेख थियो। १५५ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने गरी भएको उक्त सम्झौतालाई पुनः सन् २००८ को अगस्टमा दुई देशबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सम्झौता गरियो। यो सम्झौता अनुसार तातोपानी नाका हुँदै नेपाल र चीनबीच इन्टरनेट जोडिने उल्लेख थियो। तर, २०७२ वैशाखमा गएको भूकम्पका कारण सो रुट पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएपछि नयाँ रुटको विकल्प खोजी रसुवागढी हुँदै इन्टरनेट नेपाल जोडिएको टेलिकमले जानकारी दिएको छ। नेपालमा चिनियाँ इन्टरनेट ल्याउने विषयमा नेपाल टेलिकम र तत्कालीन चाइना टेलिकम्युनिकेसन कर्पोरेसनबीच झाङमु र तातोपानीबीच ट्रान्सपोर्ट नेटवर्क इन्टरकनेक्सन गर्ने समझदारी भने सन २०११ मा भएको थियो।
नेपाल टेलिकमले चाइना टेलिकम ग्लोबलबाट इन्टरनेट ब्यान्डवीथ कनेक्सन ल्याएको हो। इन्टरनेट चलाउन चाहिने यस्तो ब्यान्डवीथ हाल भारतबाट मात्रै लिँदै आएको छ। चीनबाट जम्मा एक दशमलव पाँच जीबीपीएसको ब्यान्डवीथ भित्रिएको भए पनि भारतको विकल्प बनाउन सफल भएको राजभण्डारीले बताइन्। नेपालमा दुई दशक अघिदेखि भारतीय कम्पनीको इन्टरनेट भैरहवा, वीरगन्ज र विराटनगर हुँदै आएको छ। हाल टेलिकमले भारतीय कम्पनी टाटा, एयरटेल, बीएसएनएल र रिलायन्सबाट २५ जीबी प्रतिसेकेन्डमा इन्टरनेट भित्याएको छ। भारतबाट ल्याइएको इन्टरनेट भैरहवा, विराटनगर र वीरगन्ज नाकाबाट अप्टिकल फाइबरमार्फत ल्याइएको छ। चीनबाट ल्याइएको इन्टरनेटको गति भने एक दशमलव पाँच जीबी प्रतिसेकेन्ड भोल्युमको छ। टेलिकमले यो इन्टरनेटलाई विकल्पको रूपमा मात्रै प्रयोग गरेको हो। यसलाई आगामी दिनमा बढाएर भारतीय बजारसँग प्रतिस्र्धी बनाउन सकिने छ।
टेलिकमले यो इन्टरनेटलाई विकल्पको रूपमा मात्रै प्रयोग गरेको हो। यसलाई आगामी दिनमा बढाएर भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने छ।
चीनबाट कम लागतमै इन्टरनेट आएको, भारतीयको तुलनामा लोट्रिप, डिले र अल्टरनेटिभ रूटसमेत हुन पुगेको टेलिकमले जानकारी दिएको छ। चिनियाँ इन्टरनेटको औपचारिक सुरुआत गर्दै सञ्चारमन्त्री बस्नेतले देशव्यापी रूपमा इन्टरनेट पूर्वाधार निर्माणमा नेपाल–चीन क्रस बोर्डर अप्टिकल फाइबर लिंक कोसेढुंगा सावित हुने बताए। उनले चीन र नेपालबीच सरकारी, संस्थागत र जनस्तरमा भइरहेको सहयोगलाई बढाउन सकिने उल्लेख गरे। लिंक निर्माण गर्ने दुई देशको धेरै अघिदेखिको योजना भूकम्प र अन्य विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपले ढिलो हुँदा निर्धारित समयमा आउन नसकको उनले बताए। उनले अब नेपालमा चिनियाँ रेल सञ्जाल विस्तार हुने बताए।
कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले आर्थिक वृद्धि र देशको समग्र विकासमा दूरसञ्चार पूर्वाधार महत्वपूर्ण हुने बताए।नेपालका लागि चीनका राजदूत यु होङले यो लिंकले इन्टरनेट प्रयोगमा नेपाललाई विकल्प उपलब्ध भएको र यो रुट छोटो भएको पनि उनले दाबी गरे। उनले दुई देशबीचको व्यावसायिक सम्भावनालाई इन्टरनेट सञ्जालले थप नजिक ल्याउने औल्याए।
राजभण्डारीले नेपाल टेलिकमले विगत एक सय वर्षयताको चाहनाअनुसार समय सान्दर्भिक सेवा उपलब्ध गराउन प्रयास गर्दै आएको बताइन्। उनले वायरलेसतर्फ फोरजी तथा वायरलाइनमा फिक्स ब्रोडब्यान्डको विस्तार सँगसँगै सो रुटमार्फत हुने थप अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धताले ग्राकहको अपेच्छा पूरा गर्न थप सहज हुने बताइन्।
चाइना टेलिकम ग्लोबलका मूख्य प्रतिनिधि वाङ योङलिनले फाइबर लिंकले केबुलमार्फत नेपाललाई विश्व इन्टरनेट सञ्जालमा जोड्न प्रेरित गरेको बताए। योङलिनले चीन र हङकङ हुँदै युरोप, मध्यएसिया, उत्तरपूर्वी एसिया र अमेरिकासम्म जोड्न चिनियाँ इन्टरनेट महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे। कार्यक्रममा टेलिकको ब्याकबोन ट्रान्समिसन निर्देशनालयका प्रबन्धक संगिता पहारीले क्रसबोर्डर अप्टिकल फाइबर लिंकबारे आफ्नो प्रस्तुति राखेकी थिइन्।
बिहीबार, पुस २०, २०७४ दुई दिनदेखि टेलिफोन सेवा अवरुद्ध
शुक्रवार, पुस १४, २०७४ चीनले बनायो बिजुली निकाल्ने सोलार राजमार्ग !
शुक्रवार, पुस १४, २०७४ एप्पलको बदमाशी ! आईफोन स्लो बनाएपछि माग्यो माफी
सोमवार, पुस १०, २०७४ अन्तरिक्ष स्टेशनमा पाँचतारे होटल खोल्दै रुस, कति लाग्छ शुल्क ?
प्रदेश प्रमुख र अस्थायी केन्द्र आज तोकिने 2229
महिलाको शव फेला 106
फिर्ता भएका माओवादी मन्त्री अझै सरकारमा ! 341
घुससहित इन्जिनियर पक्राउ, नासु र खरिदारलाई मुद्दा 535